Feyisa Lilesa biladda Oradka kuma waayayo in uu Itoobiya ku mudaaharaaday - BBC Somali
Image caption Feyisa Lilesa ayaa calaamadan muujiyay markii uu xariijinta ugu dambaysa ee orodka ka gudbayay wuxuuna ku celiyay markii uu shirka jaraaid qabtay.
Gudiga caalamiga ah ee Olimbigga ayaa sheegay in aysan biladda kala noqonaynin oradyahankii Itoobiyaanka ahaa ee mudaaharaadka siyaasadeed sameeyay.
Feyisa Lilesa oo Oradka Olimbigga uga qaybgalay dalka Itoobiya ayaa ku mudaaharaaday dawladdiisa markii uu sii marayay xariijinta ugu dambaysa ee oradkii Axaddii hore ka dhacay magaalada Rio.
Feyisa oo galay kaalinta labaad kuna guulaystay biladda qalinka ah ayaa xariijinta ka gudbay isaga oo gacmahiisa is dhaafiyay, calaamadaas oo astaan u ah dadka Oromadaha oo gacan adag kala kulmay booliiska.
Lilesa ayaa ka yimid gobolka Oromada oo hoy u ah inta badan 35-ta milyan ee Oromada Itoobiya.
Dawladda Itoobiya oo ka jawaabtay arrintaas ayaa sheegtay in aan la xiri doonin ciyaaryahanka balse sidii halyay loo soo dhawayn doono.
Image caption Hay'adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Human Rights Watch ayaa ku qiyaastay 400 oo ruux in ay ku dhinteen mudaaharaadyada Oromada
Isaga oo sii sharaxaya ficilkiisa Lilesa wuxuu sheegay "in dawladda Itoobiya ay dilayso dadka Oromada ah ayna qaadanayso dhulkooda iyo ilahooda dhaqaalaha sidaas daraadeed dadka Oromada ah ay banaan baxayaan isaguna uu taageersanahay maadaama uu Oromo yahay.
Image caption Feyisa Lilesa oo u dabaaldagaya kaalinta labaad
Guddiga ayaa hadda BBC-da u xaqiijiyay in aan laga laabanaynin biladda qalinka ah ee uu ku guulaystay balse lagala hadlay ficilka uu ku kacay.